पुरुषको कुन अंग प्रति आकर्षित हुन्छन महिलाहरु ! जानीराखौं…… – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पुरुषको कुन अंग प्रति आकर्षित हुन्छन महिलाहरु ! जानीराखौं……
पुरुषको कुन अंग प्रति आकर्षित हुन्छन महिलाहरु ! जानीराखौं……
पुरुषहरूको आँखाले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई आकर्षित गर्छ । त्यसैले आँखालाई स्वस्थ्य राख्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि भरपुर निन्द्राका साथ साथै स्वस्थ खानाको आवश्यक हुन्छ । कपाल : कुनैपनि पुरुषको कपाल कालो र चम्किलो छ भने महिलाहरु त्यस्ता पुरुष तर्फ आकर्षित हुन्छन् । ओठ र दाँत स् गुलाबी ओठमा देखिने मुस्कान र टलक्क टल्कने दाँतले पनि महिलाहरुलाई सहजै आकर्षित गर्छ ।
छाला : सफा, स्वस्थ र चम्किलो छालाप्रति पनि महिलाहरु भुतुक्कै हुन्छन् । यस तर्फ पनि पुरुषले ध्यान दिनुपर्छ । जुँघा र दाह्री : बाक्लो जुँघा र दाह्री प्रति पनि महिलाहरु आकर्षित हुन्छन् । छाति र काँध : चौडा काँध र छाति, मस्कुलर शरीर, बलियो शरीरले महिलाहरूलाई चाँडो आकर्षित गर्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः मानिसको छाला कालो वा गोरो किन हुन्छ ? मनुष्यको शरीरमा मेलेनिन नामक पदार्थ हुन्छ जसले छालाको रंग निर्धा्रित गर्छ । सूर्यको प्रकाशको पराबैजनी किरणको सम्पर्कमा आउँदा मेलेनिन शरीरको कोशिकाबाट अत्यधिक मात्रामा निस्कन्छ र छाला कालो हुन्छ । शरीरबाट मेलेनिन धेरै उत्पन्न नभएमा छाला गोरो हुन्छ । यही कारणले नै हामी गोरा र काला हुन्छौं ।
बच्चा कुपोषणको शिकार हुँदा उसका मांसपेशीहरू लगातार कमजोर हुँदै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा बच्चाको शरीरमा भिटामिन डीको उत्पादन बन्द हुन्छ र छालाको रंग बदलिन्छ । अनि आनुवंशिक कारणले पनि छाला गोरो वा कालो हुने हो । आमाबुवाको जस्तो रंग छ, छोराछोरीको पनि त्यस्तै रंग हुन्छ । यसबाहेक वातावरणले पनि छाला कालो वा गोरो बनाउँछ । चिसो ठाउँका मानिस गोरा हुन्छन् भने तातो ठाउँका मानिस गहुँगोरा वा काला हुन्छन् ।
पर्सामा बिहे गरेर ल्याएको बेहुलिलाई एक युबकले मेरो गर्लफ्रेण्ड भन्दै बिच बाटोमै…बाटो छेकेपछी,
फिगर राम्रो नभएर दिक्क त हुनुहुन्न ? यस्ता छन् फिगरलाई पर्फेक्ट बनाउने सरल उपाय
कोरोनाबाट बच्न भनि जब यि व्यक्तिले सुनको मास्क लगाए
युटुबमा भाईरल बनेको एक नेपाली महिलाको यो भिडियो, हेरेपछि तपाईको होस उड्नेछ-